RB Leipzig Oo Guul Ka Gaartay Manchester United Kana Reebtay Champions League
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRB Leipzig oo guul ka gaartay Manchester United kana reebtay Champions League
December 9, 2020 Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxda RB Leipzig ayaa garaacday kooxda Man United iyaga oo si xun uga reebay tartanka champions League kulan ka dhacay Germany.
Kooxda RB Leipzig ayaa si dar-dar iyo wacdaro leh ku bilaabatay ciyaarta iyaga oo ciyaar Orod ah ku qar-qiyay xiddiga Man United isla markii ciyaartu bilaabatay.
RB Leipzig ayay kaliya 2 daqiiqo ku qaadatay in ay dhaliyaan goolka 1-aad dhaliyaan kadib markii uu xiddiga amaahda uga maqan Man City ee Angelino dhaliyay goolka.
Kooxda Man United ayuu khal-khal ku riday goolkaas waxana ay garan waayeen meel ay wax ka bilaabaan iyo si ay ugu jawaabaan kooxda RB Leipzig.
Xilli ay United ku jirto khal-khalkii goolka 1-aad ayay RB Leipzig mar kale United ka dhalisay goolka 1-aad waxana ka dhaliyay xiddiga Amadou Haidara kaas oo ciyaarta ka dhigay 2/0.
Wixii intaas ka dambeeyay Man United ayaa heshay fursado dhawr ah laakiin waxa ay ku fashilmeen in ay wax gool ah ka dhaliyaan.
Kooxda RB Leipzig ayaa sii waday dadaalka waxana ay daqiiqadii 30-aad ka dhaliyeen Man United gool waxana u dhaliyay xiddiga Willi Orban laakiin goolkaas ayaa loo diiday sabab la xidhiidha Offside uu ku jiray.
Waxa sidaas ku dhamaatay qaybta hore ee ciyaarta oo ay RB Leipzig kabaha la dul martay kooxda Man United wax walbana ka samaysay.
Kooxda Man United iyo tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa is badalo ku sameeyay shaxdiisa si uu ciyaarta wax uga badalo kooxdiisana dib ugu soo celiyo ciyaarta.
Kooxda Man United ayaa si dar-dar leh ku bilaabatay ciyaarta iyaga oo RB Leipzig ku qaadayay weeraro aan kaal joogsi lahayn.
Kooxda RB Leipzig ayaa daqiiqadii 69-aad dhalisay goolka 3-aad ee ciyaarta iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Justin Kluivert kaas oo ka faa’iidaystay khalad daafaca United ah isaga oo ciyarta ka dhigay 3/0.
Ciyaarta ayaa u muuqatay mid dhimatay laakiin United ayaa diiday in ay is dhiibto waxana ay sii wadeen weerarada aan kala joogsi lahayn.
Daqiiqadii 80-aad ayay Man United dhalisay goolka 1-aad iyaga oo uu rikoodhe u dhaliyay xiddiga Bruno Fernandes kaas oo ciyaarta ka dhigay 3/1.
Kooxda Man United ayaa daqiqiadii 83-aad dhalisay goolka 2-aad iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Paul Pogba kaas oo ciyaarta ka dhigay 3/2 ay United ciyaarta ugu soo laabatay.
Laakiin kooxda RB Leipzig ayaa shabaqeeda ilaashatay iyaga oo sidaas kooxda Man United kaga reebay tartanka champions League.